Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo xilkii laga qaaday | RBC Radio
Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo xilkii laga qaaday
Posted on January 10, 2017 RBC, Wararka
Gaalkacyo (RBC Radio) Baarlamaanka Galmudug ayaa maanta xilka ka qaaday madaxweynaha maamulka Cabdikariin Xuseen Guuleed,sida uu xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka.
Xilka qaadistan waxaa ay ku timid,markii baarlamaanka Galmudug ay u codeeyay in kalsoonida ay kala noqdaan madaxweyne Cabdikariin -54 xildhibaan oo ka mid ahayd 59 ka qeybqaadatay codeynta ayaa meelmariyay in madaxweyne Guuleed xilka laga qaaado.
Mooshinka xilka looga qaaday madaxweynaha Galmudug,waxaa shalay aqbalay gudoomiye kuxigeenka 1-aad ee baarlamaanka,Xareed Cali Xareed.
Wuxuu sheegay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka in la soo magacaabi doono guddi doorasho oo soo diyaarin doono doorashada madaxweyne cusub. Wuxuu inta ku daray inta ka horreysay doorashadaasi inuu madaxweyne ku xigeenka noqon doono ku sime madaxweyaha.
Baarlamaanka Galmudug waxaa ay ku sababeeyeen xilka qaadista madaxweynaha marku ku guul-dareystay dhammanba masuuliyadda sarneyd,sidoo kale waxaa ay sheegen si aan sharci ahayn inuu shaqada ka joojiyay baarlamaanka.
Madaxweynaha xilka laga qaaday ee Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa maalintii shalay ka codsaday xildhibaanada Galmudug inay ka laabtaan mooshinkii ay kasoo gudbiyeen, balse xildhibaanada ayaa dalabkaasi ku gacanseyray.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug goor dhoweyd ayaa lugu sheegay inaysan aqbali doonin natiijada ka soo baxday kulanka baarlamaanka.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweynaha Galmudug uu baarlamaanka xilka ka qaadayo,waxaanse la ogeyn sida uu ku aqbalayo Cabdikariin Guuleed si sahal ah xilkan inuu ku wareejiyo.
Waxaa kalo oo ay xilka qaadistan timid,xilli ururka Ahlasunna oo ka taliya deegaanno ka tirsan Galmudug uu shalay soo dhisay baarlamaan,kuwaaso maanta la dhaariyay,waxaana maamulka uu sheegay dhamman hay’adaha dowladda in la soo dhammeystiri doono.